Ogaden News Agency (ONA) – Jaaliyadda Saint Cloud oo shir hawleed isugu yimid
Jaaliyadda Saint Cloud oo shir hawleed isugu yimid
Posted by ONA Admin	/ July 6, 2014
Waxaa maanta oy taariikhdu tahay 07/05/14 Shir qabtay jaaliyadda S.Ogadenya ee gobalka Minnesota dagmada Saint cloud. Shirkan oy kasoo qayb galeen dhamaan xubnaha faraca magaalada ayaa waxaa la’isku weydaarsaday warbixinad halganka iyo xaaladda uu ku sugan yahay dalkeena hooyo ee Ogadenia.
Waxaa sidii caadada ahaydna lagu furay shirka aayado Quraan ah iyo wacdi diini ah oo ku saabsanaa sidii agoonta Ogadenia wax loo gaadhsiin bishan barakaysan iyo sidii dhaqaalaha jaaliyada kor loogu qaadi lahaa.
Isla shirkan ayaa waxaa lagu diray gudi kasoo qaybgasha doorashada jaaliyada gobalkaMinnesotaoo maanta ka dhacaya magaaladaMinneapolis.
Iskusoo duudboo shirkan jaaliyadda ee ka dhacay dagmadaSaint Cloudayaa ahaa shir ujeedooyinkii laga lahaa gaadhay si fiicanna u qabsomay looguna lafa guray qodobo badan oo muhiim ah. Wuxuuna kudhamaaday jawi dagan iyo kala howgal inta shirka kale laga gaaadhayo.